Baadhida HIV | Zanzu
Baadhitaanka la hubinayo haddii aad qabto HIV. Baadhitaanka la'aantii, ma hubi kartid haddii aad qabto ama aanad qabin HIV. Waxaa baadhitaano kala duwan. Baadhitaanada waxay qiyaasaan joogitaanka jidh ku lid yara iyo/ ama farysaka il maqabatayga ah. Baadhitaanku waxa uu bixiyaa natiijooyin la isku halayn karo ilaa 6 todobaad ka dib markaa gasho khatarta ah caabuqa.
Noolaanshaha la'aanta daawaynta HIV